Xeerka kufsigu waa kan ugu bedbedelka badan sannadihii ugu dambeeyey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Wasiiradda caddaaladda Beatrice Ask. Sawirle: Foto: Bertil Enevåg Ericsson/TT
Xeerka kufsigu waa kan ugu bedbedelka badan sannadihii ugu dambeeyey
La daabacay fredag 31 januari 2014 kl 11.42
Kulan ey gelinkii dambe ee khamiistii isugu yimaadeen xubnaha guddi-hoosaadka cadaaladda ee baarlamanka ayuu ahaa go'aan ey ku heshiiyeen xubnaha xisbiyada Sooshiyaal-dimoqoraadiga, iyo xisbiyada isu-tagga ee awoodda dalka gacanta ku haya in dawladda dib loogu celiyo si ey baaritaan ugu sameeyso xeerka kufsiga ka deg-san. Baaritaanka ayaa si gaar ah u eegi doona in xeerka gun-dhig looga dhigo waxa lagu magacaabo "Samtycke - isku raacid, isku af-garasho" ama sida xeerka Noorwiijiyaankuba u qoran yahay "ka taxadar la'aan". Waxaa sidoo kale baaritaanka lagu eegi doonaa sababta ka dambeeysa in dacwooyin badan ee kufsiga la xiriira aaney gaarin heer maxkamad la isku soo taago.
Xisbiyada Bidixda (vänster) iyo doogga (Miljö) ayaa gaashaanka u laaley fikirkaa maadaana ey qabaan in xeerka middaa iminkaba lagu kordhin karo ee aan loo baahneyn baaritaan. Halka uu xisbiga SD la safatay xisbiyada xisbiyada.
Wasiirka cadaaladda ee dalka Iswiidhen Beatrice Ask ayaa soo jeedisay in la suurtagalka ah in la sameeyo baaritaan la xiriira xeerka kufsiga, mar ay u warrameeysay laanta wararka ee Ekot.
Xisbiga Mudaraatka ayaa noqdey xisbigii ugu dambeeyay ee wax ka bedela fikirkiisa ah in dib u eegis lagu sameeyo xeerka dalka u deg-san ee la xiriira tacadiyada galmada la xiriira ee loo geeysto haweenka. Isagoona uu xisbigaasi ku biiray raxantii kale ee xisbiyada ee horay u taabac-sanaa fikirkaa, sida ay sheegtay wasiiradda cadaaladda ee dalka Iswiidhen Beatrice Ask oo u warrantay laanta wararka ee Ekot:
- Waxaan aamin-sanahay inuu yahay fal wanaag-san in baaritaan middaa lagu sameeyo. Waa dhabbada keliya ee tallaabo horay loogu qaadi karo. Laba jeer ayaan horey baaritaan ugu sameeyney waxa lagu magacaabo "samtycke - in la isla ogolaado galmada", haddiise ey weli mugdiyo ka jiraan iyo doodo waa loo baahan yahay in laba kacleeyn lagu sameeyo, sida ay sheegtay Beatrice Ask
Muddo aan sidaa u dheerayn ayay ahayd kolkii uu hoggaanka xisbiga Mudaraatku diidmada kala soo hor-jeeday baaritaan noocani ah ee la sameeyo. Maxaa haddaba ugu wacan in xisbigu sidaa mowqifkiisa uga tallaabsado? - Xaqiiqdii waxa badalay waa in laga faa'iideysto oo wax lagu qaato doodaha socda:
- Middaa aannu iminka eegeynaa tahay sidii tallaabo horey looga sii qaadi lahaa, sida ay sheegtay Beatrice Ask iyada oo hadalkeedii sii wadata.
Kuleeylihii ina dhaafay ayay ahayd kolkii xeerka kufsiga is-bedel lagu sameeyey, hase yeeshee aan lagu darin qodobka "isku af-garashada - Samtycke". Waana mid aan suurtagal ahayn in xukun lagu rido shakhsi xoog wax ku kufsaday haddii "diidmmadu aaney ku filleyn oo loo fasirto "maya". Markaa waxaa loo baahan yahay in baaritaan middaa lagu sameeyo, sida ey aamin-san yihiin dadyoow fikirka baaritaanka u ololeeya.
Cabsi ballaaran ayay wasiirraddu horay uga qabtay, isla-markaana ey ku diiddaneyd xeerka dhowaantan dib u eegista lagu sameeyey, maadaama tooshku beeg-san lahaa dhibbanaha kufsiga loo geeystay, sida lagu soo ban-dhigay baaritaankii ugu dambeeyay, hase yeeshee iminka dhanka kale isu rogtay:
- Xaqiiqda ah in albaabka loo furo baaritaan xeerkaa lagu sameeyo ayaa la macne ah in dib u eegis lagu sameeyo fikirrada ey salka hayaan doodaha isa soo taraya, sida ay sheegtay.